Cabdiweli Cali Gaas: Avv Cabdicasiis Nuur Xirsi wuxu ahaa nin nagu weyn
Picture/ Veteran Politician Dr Cabdicasiis Nuur Xirsi
Khamiis, Garowe, 28, 01, 2014- Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta tacsi ka direy geerida Marxuum Cabdicasiis Nuur Xirsi oo ka mida ahaa odayaashii Puntland wax ka dhisay islamarkaasina horey xilal kala duwan uga soo qabtay Somalia.
Shir ayuu Madaxweynuhu saxaafada ugu qabtay xafiiskiisa Madaxtooyada Garowe, isagoona Samiir iyo Imaan Alle uga baryay inuu ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku.
‘’Waxaan rabaa inaan halkan uga diro tacsi eheladii, qaraabadii iyo umadda Somaliyeed gaar ahaan reer Puntland geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Marxuum Cabdicasiis Nuur Xirsi oo xalay ku geeriyooday magaalada Boston ee dalka Maraykanka’’ Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Sidoo kale waxa uu ka shekeeyay Madaxweyne Cabdiweli Gaas in kooban oo ka mida Taariikh nololeedkii marxuumka waxana uu yiri ‘’Waxa uu ahaa oday ku wayn Puntland iyo Somalia oo dhan, waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii dowladda Puntland, sidoo kale xubin firfircoon Barlamankii dalka intii u dhaxeysay 1964-1969, isagoo markii danbe xilal kala duwan oo wasaaradeed ka soo qabtay dowladii jirtay, waxana uu ahaa sharci yaqaan’’.
INAA LILAAAHI WA INAA ILAYHI RAAJICUUN.
Xigasho: Xafiiska Warfaafinta ee Madaxwaynaha Puntland
Daadir Xasan	January 30, 2014 4:57 pm
cabdiweli gaas sheeko xumada meesha hakala tago cabdicasiis nuur xersi wuxuu ahaa nin ay ku weyn tahay soomaalinimadu maahayn nin qabiil iyo deegaan gooni ah ay ku weyn tahay dadkii soomaaliya usoo shaqeeyay ayuu kamid ahaa wiilkaan gaas ee orodka badan ee wixii reer puntland ka dhaxeeyay qabiileeyay oo reerahiisa siistay waxba makala oga ee edeb ha yeesho.
anniga iyo qoyskayga waxaanu tacsi u diraynaa dhamaan ehelka oo dhan ilaahay waxaan uga beryaynaa marxuumka inuu janadii fardowso ahayd uu ka waraabiyo
Reply Qaran qurux	January 30, 2014 5:14 pm
gaasoow saakay ma kiniinigii ayaa soo iloowday afkaaga suubso abuukaate cabdicasiis nuur xirsi wuxuu ahaa nin qaran maahan nin qabiil iyo meesha aad ka hadlaysid waxaan ku xasuustaa xisbigii uu aasaasay 1960-kii ee howl iyo hanti wadaag ilaahoow u naxariiso
× one = 8	Tacsi